नि:शुल्क YouTube भ्यूहरू | नि:शुल्क YouTube लाईक | नि: शुल्क YouTube टिप्पणीहरू
नि:शुल्क YouTube भ्यूहरू | नि: शुल्क YouTube लाईकहरू
नि: शुल्क YouTube सदस्यहरू | नि: शुल्क YouTube टिप्पणीहरू
#1 YouTube संलग्नता प्लेटफर्म वास्तविक व्यक्तिहरूबाट निःशुल्क YouTube भ्यूहरू, लाइकहरू, टिप्पणीहरू र सदस्यहरू प्राप्त गर्नका लागि!
यस्ले कसरी काम गर्छ? अन्य सदस्यहरूको च्यानलहरूसँग संलग्न भएर सिक्का कमाउनुहोस्। त्यसपछि, GoViral मा तपाईंका भिडियोहरू आयात गर्नुहोस्, तपाईंले प्राप्त गर्न चाहनुहुने सेवाहरू छनौट गर्नुहोस् र केही मिनेटमा, तपाईंले वास्तविक व्यक्तिहरूबाट भ्यूहरू, लाइक टिप्पणीहरू र सदस्यहरू प्राप्त गर्न सुरु गर्नुहुनेछ, नि:शुल्क!
अब नि:शुल्क YouTube वृद्धि प्राप्त गर्नुहोस्! or YouTube सदस्यहरू खरिद गर्नुहोस्
GoViral दैनिक प्रयोगका फाइदाहरू
वास्तवमै प्रयोग गर्न स्वतन्त्र!
शुल्कको लागि अपग्रेड गर्न विकल्पहरूको साथ नि: शुल्क प्रीमियम गुणस्तर सेवाको अनुभव लिनुहोस्।
तपाईंलाई निःशुल्क अवलोकन, मनपराउने, सदस्यता र टिप्पणीहरू दिन्छ
हाम्रो नेटवर्कले तपाईंलाई छिटो र सजीलो सित्तैको सदस्यता, विचार, मनपर्दो र टिप्पणीहरू लिन अनुमति दिन्छ। तपाईलाई चाहिने सबै!
स्वचालित YouTube ग्रोथ
हाम्रो नेटवर्कमा तपाईंको भिडियोहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् र तपाईंले प्राप्त गर्न चाहानु हुने प्रत्येक सेवाको मात्रा इनपुट गर्नुहोस्। त्यसोभए, टाढा हिंड्नुहोस् र हाम्रो नेटवर्कले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा सबै डेलिभर गर्न दिनुहोस्।
अर्गानिक वृद्धि सुधार गर्दछ
सदस्यहरू, हेराईहरू, मनपराउनेहरू र टिप्पणीहरू लिनाले तपाईंको खोजी क्रमलाई बढाउन मद्दत गर्दछ, जसले तपाईंको कार्बनिक वृद्धि र स increase्लग्नता बढाउन मद्दत गर्दछ।
तपाइँको समय बचत गर्दछ
तपाइँको सामग्री र जोश मा फोकस गर्नुहोस् हाम्रो नेटवर्कले तपाइँको च्यानल र भिडियोहरूमा सment्ग्रह प्रदान गर्दछ।
प्रयोग गर्नका लागि सुपर सजिलो
हाम्रो ईन्टरफेस उपयोगकर्ता मैत्री र स्व व्याख्यात्मक छ। लगईन गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियोहरू आयात गर्नुहोस्, ग्राहकहरूको संख्या, विचार, मनपर्दो र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न को लागी चयन गर्नुहोस् र तपाईंले गर्नुभयो!
भिडियोहरू हेरेर र उनीहरूसँग संलग्न भएर सिक्का कमाउनुहोस्।
आफ्नो सिक्का खर्च
तपाइँको सिक्का नि: शुल्क अवलोकन, मनपर्ने, सदस्यता र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न खर्च गर्नुहोस्।
तपाईं सदस्यता, हेराईहरू, मनपर्दो र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्दा पछाडि बस्नुहोस्!
यसले मलाई मेरो च्यानल बढाउन मद्दत गरिरहेको छ ...
हाम्रो पृष्ठलाई स्पटलाइटमा द्रुत रूपमा प्राप्त गर्न हामीलाई चाहिने बढावा यो नै हो!
कस्तो राम्रो सेवा!
यस्तो ठूलो सेवाको लागि धेरै धेरै धन्यबाद! GoViral उत्तम अनुप्रयोग सँधै हो!
@ डायना २०१1987
तपाईं गएको केहि बर्षदेखि हुनुहुन्छ?
नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू पाउनुहोस् र यूट्यूब मार्केटिंगको साथ मूल्यवान व्यवसाय रिटर्न कमाउनुहोस्
के तपाइँ तपाइँको व्यापार बढाउन र तपाइँको व्यापार नाफा अधिकतम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले भिडियो मार्केटिंग को उपयोग गर्नु पर्छ। भिडियो मार्केटिंगको योजना बिना आज कुनै समकालीन व्यापार मार्केटिंग रणनीति पूरा भएको छैन। सबै पछि, जब यो सामग्री मार्केटिंगको कुरा आउँदछ, भिडियोहरू सर्वाधिक आरओआई दर्ता गर्छन्। जे भए पनि भिडियो मार्केटिंगमा संलग्न हुनुको पछाडि तपाईंको के खास लक्ष्यहरू छन्, अभ्यास निश्चित रूपमा निश्चय नै वितरण हुनेछ।
भिडियो मार्केटिंग मार्केटिंग सर्कलमा राम्रोसँग मान्यता प्राप्त छ दुबै ड्राइभ ग्राहकको सment्लग्नताको लागि र तपाईंको व्यवसायको लागि सीसा उत्पन्न गर्न। यदि तपाईंले अझै आफ्नो सामग्री मार्केटिंग योजनामा ​​भिडियो मार्केटिंग समावेश गर्नुभएको छैन भने, यो समय हो तपाईंले त्यसो गर्नुभयो। भिडियो मार्केटिंग केवल निकट भविष्यमा उच्च उचाइ मापन गर्न गइरहेको छ र तपाइँको व्यवसाय को लागी मार्केटिंग को लाभ को एक श्रृंखला को उपलब्ध गराउँछ।
तपाईंको व्यापार मार्केटिंग भिडियो सामग्री होस्टिंगको लागि किन YouTube छनौट गर्नुहोस्
हामी सम्भवतः अनलाइन भिडियोको बारेमा कुरा गर्न सक्दैनौं र YouTube को उल्लेख गर्दैनौं। भिडियो होस्टिंग र साझेदारी गर्ने वेबसाइट अनलाइन भिडियो सामग्रीको पर्यायवाची भएको छ। वास्तवमा, प्रायः व्यक्तिहरू अनजान छन्, तर युट्युब विश्वको दोस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय खोज इञ्जिन हुने गर्दछ। अर्को शब्दमा, तपाइँसँग वेबसाइटमा एक दर्शक तयार छ, र YouTube मा मार्केटिंग भिडियो सामग्री अपलोड गर्दा तपाइँलाई SEO को मामलामा पनि उच्च श्रेणीमा मद्दत गर्दछ। तपाईंको YouTube व्यवसाय च्यानलमा YouTube हेराईहरू कमाउँदा तपाईंलाई तपाईंको ब्रान्डको दृश्यता अझ राम्रो बनाउन र यसको पहुँच सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए, किन तपाईं आफ्नो अन्य मार्केटिंग भिडियो सामग्री अपलोड गर्न सम्भवतः कुनै अन्य भिडियो होस्टिंग वेबसाइट छनोट गर्न चाहानुहुन्छ?
युट्युब मार्केटिंगका मापनयोग्य डेटा-समर्थित लाभहरू
यस सेक्सनमा, हामी तपाइँले प्राप्त गर्नुहुने सबै सुविधाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा हेर्दछौं जब तपाइँ तपाइँको व्यापार मार्केटिंग को लागी भिडियो साझा गर्न को लागी YouTube को आफ्नो मनपर्ने प्लेटफर्म को रूप मा छान्नुहुन्छ:
अविश्वसनीय एक्सपोजर - YouTube सबै भिडियो साझा वेब सेवाहरु को राजा हो। १ 15--55 उमेरका प्रयोगकर्ताहरू नियमित आधारमा प्लेटफर्ममा पहुँच गर्छन्। यो सुरक्षित छ कि एक भिडियो तपाईंलाई याद गर्न मद्दत गर्न सक्छ। जहाँसम्म, वेबसाइटमा एक टन भिडियो सामग्री छ, र तपाईंले त्यहाँ गुणस्तरीय अनुकूलित भिडियोहरू क्राफ्ट गर्न सक्षम हुनुपर्दछ कि उनीहरूले होस्ट गरेका सबै भिडियोहरूको समुद्रीमा हराउने छैनन् भनेर। तपाईंको भिडियो सामग्रीको लागि अवलोकन दृश्य कडा परिश्रमको साबित हुन सक्छ। यस कारणका लागि, यदि तपाईंले प्राप्त गर्न कुनै तरिका फेला पार्न सक्नुहुनेछ निःशुल्क YouTube हेराईहरू तपाइँको व्यवसाय युट्यूब च्यानल को लागी, तपाइँ यसलाई सजिलै उपयोग गर्नु पर्छ।
उच्च ट्राफिक - YouTube दिन भर उच्च प्रयोगकर्ता यातायात दर्ता। यसको अरब-शक्तिशाली उपयोगकर्ता जनसंख्या वेब होस्टिंग म्याग्नेटमा एक अरब घण्टा भन्दा धेरै भिडियोहरू हेर्दछ। नि: शुल्क भिडियो होस्टिंग सेवा केबल टेलिभिजन भन्दा दर्शकहरूको एक व्यापक स्पेक्ट्रम पुग्न सक्षम छ। यो मार्केटिंग भिडियो को उत्पादन को लागी एक कम लागत प्रसार रणनीति संग व्यवसाय प्रदान गर्दछ। यदि सही रूपमा प्रयोग भयो भने, तपाईं पनि तपाईंको मार्केटिंग भिडियो सामग्रीमा अरबौं दृश्यहरू श्रेणीकरण गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको ब्रान्डको लागि आगमन व्यवसायको स्ट्रिमको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्।
वायरलताको लागि सम्भावित - YouTube ले उनीहरूको भिडियो सामग्रीलाई भाइरल बनाउनका लागि धेरै धेरै सम्भावित व्यवसाय प्रदान गर्दछ। तपाईं आफ्नो भिडियो सामग्री बिभिन्न अन्य मार्केटिंग संचारमा राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईंको ब्लग पोष्टमा मिसाउने वा लि its्कइन फोरममा यसको लिंक साझेदारी गर्ने।
सुधारिएको SEO - जबदेखि गुगलले युट्यूब अधिग्रहण गर्‍यो, खोजी इन्जिनले यूट्यूब भिडियो सामग्रीका साथ वेबसाइटहरूलाई यसको खोजी ईन्जिनहरूमा उच्च पार्दछ। अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको YouTube मा आफ्नो भिडियो सामग्री रणनीति निर्माण मात्र गर्दैन तपाइँ तपाइँको YouTube मार्केटि profit लाई नाफा पार्ने विचारहरु लाई जित्न मद्दत गर्दछ, तर यसले तपाइँको समग्र डिजिटल मार्केटिंग प्रयासलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ। जब तपाइँको व्यापार वेबसाइट को लागी एसईओ रैंकिंग को वृद्धि गरीन्छ, तपाइँको ब्रान्ड वेब पृष्ठ स्वचालित रूप बाट उच्च पृष्ठ दृश्यहरु रेजिस्टर गर्दछ।
सामाजिक मिडिया मार्केटिंगको साथ सजिलो एकीकरण - सेयर गर्न योग्य भिडियो सामग्री भन्दा सामाजिक मिडिया मार्केटिंग को लागी केहि प्रभावी रूपले काम गर्दैन। जब तपाईं YouTube मा तपाईंको व्यवसायको लागि उच्च मूल्यको मार्केटि video भिडियो सिर्जना गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई आफ्नो सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा साझेदारीको लचिलोपनको आनन्द लिनुहुन्छ। अधिक व्यक्तिहरूले सोशल मिडिया प्लेटफर्महरूमा भिडियोहरू देख्न सक्छन् जुन तपाईंको व्यापार च्यानल खोज्न भन्दा उनीहरूको समाचार फिडहरूमा देखा पर्दछ। यदि उनीहरूले तपाइँको भिडियो सामग्रीलाई सोशल मीडियामा मनपराउँदछन् भने तिनीहरू सजिलैसँग आफ्ना साथीहरू र परिचितहरूसँग उनीहरूको व्यक्तिगत सामाजिक मिडिया ह्यान्डलहरू मार्फत साझेदारी गर्दछन्। यूट्यूब, तब, तपाईंलाई भिडियो मार्केटिंग र सोशल मिडिया मार्केटिंगको फाइदाहरू एक उच्च परिणामहरू द्वारा संचालित मार्केटिंग रणनीतिमा मिलाउन अनुमति दिन्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच - YouTube ले विश्वभरि लोकप्रियता पाउँदछ। यो countries 88 देशहरूमा सञ्चालनमा छ र 76 XNUMX विविध भाषाहरूमा प्रस्तुत गरिन्छ। कुनै अन्य वेब भिडियो होस्टिंग सेवाले तपाईंको व्यवसाय मार्केटिंग भिडियोहरू विस्तार गर्न सक्दैन जुन यूट्यूबले गर्न सक्ने वैश्विक पहुँच। जब तपाइँ नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ र YouTube मा तपाइँको ब्रान्ड मार्केटिंग भिडियोहरूको लागि सफलता गणना दृश्य वृद्धि गर्दछ, तपाइँले यसलाई सामाजिक स्वीकृति प्रदान गर्नुहुन्छ। दर्शकहरू उच्च दृश्य गणनाको साथ भिडियोमा अधिक ग्रहणशील हुन्छन् जुन उनीहरूलाई भिडियो हो जुन उनीहरू भन्दा कम मानिसहरूले हेरेका छन्।
कसरी YouTube मार्केटिंगको साथ सुरू गर्ने
अब जब तपाइँ युट्युब मार्केटिंगमा डबल तयार हुनुहुन्छ, हामीले सोच्यौं कि तपाइँ कसरी सुरू गर्ने भन्ने बारे गाइड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। YouTube मार्केटिंग शुरुवातकर्ताहरूका लागि बोझिला लाग्न सक्छ जसले विपणन उपकरणको रूपमा भिडियो होस्टिंग र साझेदारी सेवा प्रयोग गर्नुभएन। प्रभावी YouTube मार्केटिंगमा मुठीभर कार्यहरू सामेल छन् जसमा तपाईंको उचित ध्यान र हेरचाह आवश्यक छ। तपाईंले राम्रो परिणामहरूको लागि YouTube च्यानल कसरी सिर्जना गर्ने भनेर जान्नुपर्दछ र खोज ईन्जिनमा अनलाइनमा उच्च स्तर निर्धारण गर्नको लागि तपाईंले YouTube मा सिर्जना गरेको भिडियोहरू अप्टिमाइज गर्नुहोस्। तपाइँले YouTube विज्ञापन अभियानहरू कसरी व्यवस्थापन र अपरेट गर्ने भनेर बुझ्नुपर्दछ, साथै युट्यूबको भिडियो एनालिटिक्स द्वारा उपलब्ध मेट्रिक्सको विश्लेषण पनि गर्न आवश्यक छ।
तल, हामी कसरी तपाइँ तपाइँको YouTube भिडियो मार्केटिंग यात्रा प्रभावी ढ your्गले तपाइँको ब्रान्डको व्यवसाय नाफा को लागी शुरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मा सूचकहरु साझा।
एक व्यवसाय YouTube च्यानल सिर्जना र अपरेट गर्दै
यदि तपाईं तपाईंको यूट्यूब व्यापार मार्केटिंगबाट इष्टतम लाभहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, गुगलमा एक ब्रान्ड खाताको लागि अप्ट गर्नुहोस् तपाईंको व्यक्तिगत खाता प्रयोग गर्नुभन्दा यूट्यूबको लागि साईन अप गर्न। एक ब्रान्ड खाता धेरै व्यक्तिलाई तपाइँको ब्रान्डको युट्यूब खातामा साइन इन गर्न सक्षम गर्दछ, र यो व्यक्तिले मात्र सिर्जना गरेको होईन। यदि तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत गुगल खाता प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको यूट्यूब खाता प्रयोगकर्ताको नाम त्यो हो जुन तपाईंले गुगलमा आफैंको लागि निर्दिष्ट गरिसक्नु भएको छ। एक साथ धेरै यूट्यूब च्यानलहरू सिर्जना र प्रबन्ध एक ब्राण्ड खाताको साथ निर्बाध अनुभव हुन्छ, जुन तपाईंलाई तपाईंको व्यवसाय बढ्दै जाँदा फाइदा हुन्छ।
प्रभावकारी सामग्री सिर्जना पर्याप्त अनुसन्धान बिना मुश्किलै मात्र सम्भव छ। यदि तपाइँ तपाइँको YouTube भिडियो राम्रो प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँको YouTube दर्शकको डेमोग्राफिकको बारेमा थोरै सिक्नुहोस्। कुन संस्कृति तिनीहरू मध्येका हुन्, तिनीहरूको उमेर दायरा के हो, र उनीहरूले कसरी तपाईंको सामग्री उपभोग गर्न छनौट गरिरहेका छन्? यस जानकारीको साथ आफैंलाई परिचित गर्नाले तपाइँलाई उच्च रूपान्तरण लक्षित YouTube भिडियो मार्केटिंग सामग्री उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले आफ्नो ब्रान्डको YT च्यानलमा पहिले नै भिडियो सामग्री प्रकाशित गर्नुभएको छ भने, तपाईं वेबसाईटको एनालिटिक्स ट्याब प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको श्रोता जनसांख्यिकी र व्यवहारको बारे सिक्न। अन्य सामाजिक मिडिया पृष्ठहरूमा तपाईंको अनुयायीहरूको साथ दर्शक डेमोग्राफिकमा ओभरल्याप खोज्नुहोस्। यो तपाइँको तपाइँको समग्र विपणन सामग्री निर्माण को साथ मद्दत गर्नु पर्छ।
YouTube मा तपाइँको ब्रान्डको प्रदर्शनलाई तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरूकोसँग तुलना र मूल्या assess्कन गर्नुहोस्। तिनीहरूको भिडियोमा हेराईहरू र तिनीहरूको च्यानलहरूमा सदस्यहरूको संख्या हेर्नुहोस्। तपाईं त्यस पछि तपाईंको यूट्यूब मार्केटिंग भिडियोको प्रदर्शनको लागि बेन्चमार्क सेट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ आफ्नो कुञ्जीशब्दहरू र उनीहरूका भिडियोहरू शिल्पको लागि प्रेरणाको लागि प्रदान गरिएको सामग्री वर्णन याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो ले भन्यो, तपाईको दृष्टिकोणमा सँधै मौलिक हुनुहोस्। युट्यूबमा ट्र्यान्डि videos भिडियोमा ट्याब राख्नु पनि राम्रो अभ्यास हो, जसले तपाईंलाई उच्च प्रदर्शन भिडियो सामग्री सिर्जना गर्न ग्लेन सुझावहरू र युक्तिहरू मद्दत गर्दछ।
उत्तम परिणामहरूको लागि YouTube भिडियो सामग्री अनुकूलित गर्दै
यूट्यूब एक भिडियो खोज ईन्जिन हो जसले यसको सामग्रीलाई किवर्ड, शीर्षक, वर्णन, र यस्तै अन्य कुनै पनि अन्य खोज इञ्जिनको आधारमा दर्ता गर्दछ। यदि तपाईं आफ्नो YouTube भिडियो सामग्री सजिलै भेट्टाउन चाहनुहुन्छ र पूर्वनिर्धारित रूपमा नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं होस्टिंग सेवाको लागि सिर्जना गर्नुभएको भिडियोहरू अनुकूलन गर्न चाहानुहुन्छ। YouTube को सिफारिश एल्गोरिथ्मले दर्शकहरूलाई उनीहरूको अवलोकन प्राथमिकताहरूमा आधारित सुझाव दिन्छ। तपाईं YT मा आधारभूत कुञ्जीशब्द अनुसन्धान गरेर र उच्च प्रदर्शन गर्ने कुञ्जीशब्दहरूको लागि सम्बन्धित भिडियो सामग्री क्राफ्टिंग द्वारा सिर्जना गर्नुभएका भिडियोहरूको लागि उच्च दृश्य गणना पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने कुरा भनेको हो -
प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको साथ एक मजबूत शीर्षकको साथ आउनुहोस् जुन YouTube एल्गोरिथ्म द्वारा सजिलैसँग स्वीकार गरिनेछ। स्प्याम्मी हुन वा क्लिक-बाईस शैली लेखन अनुसरण नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्; यो अनिवार्य रूपमा तपाइँको YouTube भिडियो को लागी गरीब SEO को लागी नेतृत्व गर्नेछ।
तपाइँको भिडियो थम्बनेल अनुकूलित गर्नुहोस्। तपाईंको भिडियो थम्बनेल पहिलो चीजहरू मध्ये एक हो जुन दर्शकहरूले तपाईंको YouTube भिडियोको बारेमा याद गर्छन्। आकर्षक आँखा लिने थम्बनेलले व्यक्तिलाई क्लिक गर्न र तपाईंको यूट्यूब भिडियो सामग्री प्ले गर्न प्रोत्साहित गर्दछ। उत्तम थोरै परिणामहरूका लागि यस थम्बनेललाई यथासम्भव उच्च-रिजोलुसन बनाउनुहोस्।
स्पष्ट र संक्षिप्त भिडियो वर्णन लेख्नुहोस्। व्यक्तिहरूले भिडियो प्ले गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ र अन्त सम्म यो हेर्दै जान्छ कि यदि तिनीहरूले भिडियोको विषय उनीहरूको लागि रूचि भएको छ भनेर पक्का गर्न सके। तपाईंको भिडियोको लागि एक कुञ्जी शब्द समृद्ध भिडियो विवरणले तपाईंको भिडियो दर्शकहरूको लागि अझ अपील गर्दछ र तिनीहरूलाई रनटाइम मार्फत राख्न मद्दत गर्दछ।
कार्ड, वाटरमार्क, र बम्पर विज्ञापनको रूपमा CTA हरू समावेश गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँको प्रोमोशनल यूट्यूब भिडियो को दर्शकहरु तपाइँको व्यवसाय को पक्ष मा कार्य गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईको यूट्यूब ब्रान्ड मार्केटि video भिडियो सामग्रीमा यी तत्वहरू सम्मिलित गर्नाले तपाईंको भिडियो श्रोतालाई तपाईंको व्यवसाय बिक्री फनेल प्रविष्ट गर्न आवश्यक पर्ने धक्का दिन सक्छ।
तपाईंको भिडियो दर्शकहरूलाई मनपराउँनुहोस्, साझेदारी गर्नुहोस्, र तपाईंको भिडियो सदस्यता लिनुहोस्। यो सगाई ड्राइव र अनुकूलन YouTube एल्गोरिथ्ममा तपाईंको रैंक लाई प्रभावित गर्दछ।
एक प्रभावकारी र उच्च प्रदर्शन YouTube सामग्री मार्केटि strategy रणनीति एक हो कि नियमित रूपले आफैंमा पुनः मूल्याses्कन गर्दछ र श्रोताको आवश्यकता र चाहनासँग मिल्दो बनाउन आफैलाई पुन: निर्माण गर्दछ। यो पनि पछिल्लो बजार प्रवृत्ति संग गति राख्छ। जब तपाइँ तपाइँको व्यवसाय को लागी एक यूट्यूब चैनल बनाउनु हुन्छ, तपाइँ आफ्नो भिडियो मार्केटिंग प्रयासहरु संगठित गर्न एक भिडियो प्रकाशन तालिका कोर्न को लागी र राम्रो पालन गर्नु हुनेछ।
तपाईं आफ्नो सामग्री थप क्याप्शन थपेर तिनीहरूलाई प्लेलिस्टमा व्यवस्थित गरेर, र तपाईंको यूट्यूब च्यानलको लागि ट्रेलर बनाएर थप हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको ब्रान्ड मार्केट गर्नको लागि विभिन्न प्रकारका भिडियोहरू सिर्जना गरेर तपाइँ YouTube मा तपाइँको भिडियो सामग्री पोर्टफोलियोमा विविधता ल्याउन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, तपाइँ तपाइँको च्यानल को लागी विकास को हरेक व्याख्याकर्ता भिडियो को लागी एक ग्राहक अनुभव वीडियो ब्लग अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रभावकारी मार्केटिंग हाल उच्च सफलता दर्ता गर्दै छ। तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको यूट्यूब भिडियो च्यानल लोकप्रिय बनाउन लोकप्रिय YouTubers संग एक साझेदारी टाई सक्छ वा उल्लेखनीय प्रभावशाली अन्य सामाजिक मिडियामा तपाइँको भिडियो साझा गर्न सक्नुहुन्छ। एक राम्रो मनपरेको युट्युब च्यानल अपरेटिंग को ट्रिक भनेको तपाईंको यूट्यूब भिडियो सामग्रीको प्रदर्शन आवधिक रूपमा समीक्षा गर्नु हो र समयको साथ अपडेट गर्न ईच्छा गरे अनुसार परिवर्तन गर्नु हो। धेरै उपकरणहरू, जस्तै क्यान्भा र च्यानलभ्यु अनलाइन उपलब्ध छन्, जुन तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरूलाई मद्दत गर्न र बढाउन सक्दछ। यदि तपाइँ YT मा तपाइँको भिडियो मार्केटि .्ग बढाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ तिनीहरूलाई रोजगार दिन पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
सारांशमा, YouTube मार्केटिंग एक ब्रेनर जस्तो देखिन्छ जब तपाईं भिडियो मार्केटिंगको दुनियामा कदम चाल्नुहुन्छ। जबकि त्यहाँ धेरै भिडियो होस्टिंग र साझेदारी सेवाहरू नि: शुल्क अनलाइनमा Vimeo र डेली मोशनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ, कुनै पनि YouTube मा प्रस्ताव गरिएको पहुँच र सजिलो को उपयोग गर्न प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यूट्यूबले एक विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय भिडियो होस्टिंग र साझा वेबसाइट प्रदान गर्दछ एक साधारण, नो-परेशानी इन्टरफेसको साथ जुन रैंक शुरुवात गर्नेहरूले उनीहरूको भिडियो सामग्री अपलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। आज, YouTube पनि सबै डिजिटल मिडियामा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने वेबसाइटहरू मध्ये एक हो। तपाईको ब्रान्डको लागि बृहत्तर दर्शकहरूमा पुग्नको सम्भाव्यता प्रयोग गरेर तपाईं राम्रो गर्नुहुन्छ।
हामीले तपाईंको व्यवसायको लागि उत्पादक युट्युब मार्केटि strategy रणनीति विकास गर्नका लागि अनुसरण गर्न सक्ने सबै चरणहरू माथि वर्णन गरेका छौं। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंलाई सफल युट्युब व्यापार च्यानल स्थापना गर्न थप सहायताबाट फाइदा उठाउन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं सहि ठाउँमा आउनु भयो। नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू पाउनुहोस् र उत्तम तरिकामा तपाईंको व्यवसाय भिडियो मार्केटिंग बढावा। यदि तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु तपाइँको ब्रान्डको YouTube च्यानल द्वारा उत्पादित सामग्री को प्रतीक्षा गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ हाम्रो अनुभव र मद्दत को विशेषज्ञता मा भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको YouTube दर्शकहरू र तपाइँको व्यापार ग्राहकहरू उही सास फेर्नुहोस्!
बस दर्तात्यसपछि लग - इन र भिडियो हेर्न सुरु गर्न "सिक्का कमाउनुहोस्" सेक्सन मा जानुहोस्। प्रत्येक भिडियो तपाइँ हेर्नुहुन्छ, जस्तै, टिप्पणी र सदस्यता मा तपाइँ सिक्का कमाउनुहुनेछ।
एक पटक तपाइँ सिक्का खर्च गर्न को लागी, "मेरो भिडियो" सेक्सनमा तपाइँको भिडियो आयात गर्नुहोस् र ग्राहकहरु, दृश्यहरु, मनपर्नेहरु र तपाइँ प्रत्येक भिडियो मा प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ टिप्पणी को मात्रा छान्नुहोस्।
नि: शुल्क को लागी सिक्का कमाई जारी राख्नुहोस् ताकि तपाइँ तपाइँको भिडियोहरु को लागी अधिक सेवाहरु को आदेश गर्न सक्नुहुन्छ, वा यसको सट्टामा उनीहरु लाई खरीद गर्न "सिक्का किन्नुहोस्" मा जानुहोस्।
हो, हामी गर्छौं! केवल लग - इन र भ्रमण गर्नुहोस् "आमन्त्रित गर्नुहोस् र अधिक कमाउनुहोस्" तपाइँको अद्वितीय रेफरल यूआरएल खोज्न को लागी।
यदि तपाईं आफ्ना अर्डरहरू छिटो डेलिभर गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्नु पर्छ लग - इन र "सदस्यता" पृष्ठ मा जानुहोस्, जहाँ तपाइँ एक शुल्क को लागी गोल्ड वा प्लेटिनम योजनाहरु लाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ र "प्राथमिकता लेनदेन" प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
9th मई 2022
तपाईंको YouTube भिडियोको लागि उत्तम संगीत पृष्ठभूमि कसरी चयन गर्ने?
जब मानिसहरू भिडियोहरूको बारेमा सोच्छन्, तिनीहरू प्रायः भिजुअलहरूको बारेमा सोच्छन्। यद्यपि, सत्य यो हो कि भिडियोहरू केवल भिजुअलको बारेमा होइन - अडियोले ठूलो भूमिका खेल्छ ...
27th अप्रिल 2022
YouTube तपाईंको प्राथमिक सामाजिक खाता हुनु पर्ने ५ कारणहरू
केहि वर्ष पहिले सम्म, धेरै मार्केटरहरूले YouTube लाई Facebook, Instagram, र Twitter को मनपर्ने रूपमा सोचेकै थिएनन्। तर, समयले...
7th अप्रिल 2022
तपाईंको भिडियोको लागि उनीहरूको प्रेरणाको लागि अर्को सिर्जनाकर्तालाई कसरी श्रेय दिने?
YouTube प्रेरणादायक सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूले भरिएको छ, र यो तपाईंको भिडियोहरूमा अरूको सामग्री समावेश गर्न गलत छैन। जे होस्, जब तपाइँ गर्नुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँ विशेषता...
YouTube सेवाहरू ट्विटर सेवाहरू ट्विच सेवाहरु Pinterest सेवाहरू स्पेटिफ सेवाहरू SoundCloud Services
दृश्य सदस्यहरू टिप्पणी रुचि घण्टा हेर्नुहोस् सम्मिलित साझा
गर्वका साथ हजारौं YouTube प्रयोगकर्ताहरू सेवा गर्दै
GoViral प्रयोगकर्ता समीक्षा र तिनीहरूको अनुभव जाँच गर्नुहोस्
पाँच तारा वेबसाइट! वेबसाइटले ठूलो काम गर्दछ र सबै प्रक्रियाहरू साँच्चै सुरक्षित र सुरक्षित छन्। यदि तपाईं सेवा खोज्दै हुनुहुन्छ जुन नि: शुल्क YouTube दृश्यहरू, मनपर्‍यो, सदस्यता र टिप्पणीहरू पाउनको लागि मद्दत गर्न सक्दछ तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ। तपाइँ GoViral १००% लाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ
by लिली-रोज बोल्टन
धेरै ठूलो धन्यवाद
धेरै ठूलो धन्यवाद! राम्रो काम! GoViral मा धन्यवाद म सँधै निःशुल्क YouTube दृश्यहरू पाउँदछु। काश मैले पहिले GoViral फेला पार्न सकें, यसले मेरो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ।
केवल यस वेबसाइटलाई माया गर्नुहोस् र तपाईं सँधै ...
केवल यस वेबसाइटलाई माया गर्नुहोस् र तपाईं जहिले सदस्यहरू र मनपर्नेहरू र विचारहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ कृपया यस वेबसाइटको प्रयोग गर्न सुरू गर्नुहोस् तपाईंलाई वेबसाइट मनपर्नेछ।
हाम्रो नि: शुल्क नेटवर्कमा शामिल हुनुहोस् र आज हेराईहरू, मनपर्दो, सदस्यता र टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न सुरू गर्नुहोस्!
तपाईंको YouTube च्यानलको लागि ट्रेलर बनाउने फाइदाहरू
तपाईंको YouTube भिडियोमा मन नपर्नेहरू रोक्नको लागि सुझावहरू